ကျွန်တော်တို့ဟာ Product ကို ဖန်းတီးတဲ့နေရာမှာ feature အသေးလေးကအစ အဆင်ပြေလောက်လား? User တွေရော အသုံးဝင်ပါမလား? စသဖြင့် အချိန်ကုန်ခံပြီး စဥ်းစားရပါတယ်။ အဲ့လို အချိန်ကုန်ခံပြီးလုပ်ယူထားတဲ့ Features (သို့) ​tools တွေဟာ user တွေအသုံးပြုရတာခက်ခဲနေမယ် (သို့) ရှိလို့ရှိမှန်းတောင်မသိဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန်ခံပြီး လုပ်ထားတာတွေက အလကားပါပဲ။ အဲ့ထက်ဆိုးတာက app တောင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဖွင့်ပါမလား?? ရင်လေးစရာ။ ဒါတွေဟာ UX​ Design မှာတစ်ခုခုလွဲချော်နေလို့ပါ။
User Journey ကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြောရတာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ ထောက်နေလို့ ကျွန်တော် ဥပမာနဲ့ပဲပြောတော့မယ်။ ဆိုကြပါစို့ Shop.com.mm မှာ ​earphone ဝယ်မယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် စျေးဝယ်တဲ့ပုံစံကတော့ အောက်ကပုံသာကြည့်တော့ဗျာ။
Shop.com.mm မှာ ရိုးရှင်းစွာ စျေးဝယ်ပုံ
ကျွန်တော်စျေးဝယ်တာကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ promotion တွေဘာတွေ ထည့်မစဥ်းစားထားဘူး။ Website (သို့) App ကိုဖွင့်မယ်။ Earphone ရှာမယ်၊ တွေ့ရင်ဝယ်မယ်။ ဆိုတော့ ဒီပုံမှာဆို ကျွန်တော်ရဲ့ Goal က earphone ဝယ်ဖို့ပါ။ Earphone ဝယ်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေလုပ်ရတဲ့၊ ပုံမှာပြထားတဲ့ Steps ၅ခုကို User Journey လို့ခေါ်ပါတယ်။ Earphone ဆိုတာ ဥပမာပြောတာပါ။ Shop.com.mm ကနေကြည့်မယ်ဆို Electrical device တွေရှိမယ်၊ TV၊ Fashion၊ Watches၊ Sports အစုံပေါ့။ ဝယ်ယူတဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်လိုက််ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Journey ဟာ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ အတိုချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် User ရဲ့​​Goal ကိုရောက်ဖို့ လုပ်ရတဲ့ Steps တွေအားလုံးကို User Journey လို့ခေါ်တာပါ။
User Journey ကို အပိုင်း၂ နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ User တွေက အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Product or Service တွေကို ဘယ်လိုသုံးနေလဲ? နောက်တစ်ခုက User တွေကို ဘယ်လိုသုံးစေချင်လဲ? ဆိုပြီးခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။
User တွေက အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Product or Service တွေကို ဘယ်လိုသုံးနေလဲ?
ဒီမေးခွန်းက Product ရဲ့ Stakeholder တိုင်း မေးခံရတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Current User Journey ကို လေ့လာခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့် app ရဲ့ UI/UX Design တွေ content တွေရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတော့မယ်ဆို ဒီအချက််လေးတွေကို ပြင်ဆင်ထားပါ။
Journey Scope (သို့) Goal သတ်မှတ်ပါ။
ဥပမာ။ လူဘယ်နှစ်ယောက်က Search Box ကိုအသုံးပြုနေလဲ? Home Page ရောက်ပြီး ဘယ် Page တွေကိုဆက်သွားလဲ? User တွေက ဘာကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးလဲ?
မေးခွန်းတွေကိုဖြေဖို့အတွက် Data collect ပါ။ (ရှိပြီးသားဆို မလိုပါ။)
ဥပမာ။ Google Analytics သုံးပြီး application ကနေ Data collect လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Data ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့် team နဲ့ brainstorming လုပ်ပါ။
User တွေကို ဘယ်လိုသုံးစေချင်လဲ?
ဒုတိယပိုင်းကတော့ User Journey ကို ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ Current User Journey အရ အာသားချက်၊ အားနည်းချက်တွေကိုသိပြီဆို ပိုကောင်အောင် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကို လေ့လာတဲ့အပိုင်းပါ။
How do I create User Journey?
User Journey လုပ်တော့မယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ အချက် ၃ ချက် ကိုစဥ်းစားရပါတယ်။
Context ဆိုတာ User က ဘယ်သူတွေလဲ? ဘယ်မှာလဲ? ဘာလုပ်နေလဲ? သူတို့ရဲ့ ဒီ journey အတွက် ​​goals တွေ motivation တွေက ဘာတွေလဲ? စသဖြင့် User ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို စဥ်းစားရပါတယ်။
ဆိုတာကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အဆင့် ၅ ဆင့်ကိုပြောတာပါ။ Journey တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆို ပါဝင်ရမယ့် Step အစဥ်လိုက်ကို Sequence လို့ခေါ်ပါတယ်။
Functionality က Journey တလျှောက်လုံးမှာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ် features တွေထည့်မယ်။ ဘယ်လို အရောင်တွေ၊ UI/UX Design တွေသုံးမလဲ? စသဖြင့် steps တစ်ခုချင်းစီမှာ User ကို ဘယ်လို Present လုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်း စဥ်းစားရပါတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ Journey ဆိုရင် ဒီ ၃ ချက်က cover ဖြစ်ပါတယ်။ Complex အရမ်းဖြစ်လွန်းရင်တော့ အခြားအချက်တွေပါ ထည့်စဥ်းစားရတာပေါ့။
User Journey ကိုလေ့လာဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ Google analytics (သို့) တခြား tools တစ်ခုခုသုံးပြီး user data တွေကိုယူပါ။ New Product ဆိုရင် တခြားအလားတူ Product တွေကိုလေ့လာပါ။ အဆင်ပြေရင်ယူသုံးပါ။ အထက်ကရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ကျွန်တော်သိသလောက် Basic User Journey အကြောင်းကို ပြောပြသွားတာပါ။ မတူညီတဲ့ product/ Market/ User တွေကြောင့် Journey ကလည် းတူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းသုံးပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်ရခဲ့ရင်လည်း Product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content လေးတွေ ရေးသွားပါဦးမယ်။ အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။